Åda Nnụnụ na-ekiri | Gaa na Hultsfred
Gaa n'ihu na ọdịnaya
🎟️ kalenda mmemme
📕 Deba aha mmemme
Hazie ihe omume
🍽️ Rie & ṅụọ
Hụ ụlọ nri niile
Na nri ngwa ngwa & pizzerias
Hụ ụlọ oriri na ọ fastụ fastụ ngwa ngwa na pizzerias
🚜 ụlọ ahịa ugbo
Hụ ụlọ ahịa ugbo niile
Hụ ụlọ nkwari akụ niile
Hụ ebe nile ị mara ụlọikwuu
Hụ ụlọ obibi niile
🛏️ Ụlọ mbikọ
Hụ ụlọ mbikọ niile
👟 Ihe omume
🪑 Antique & ahịa flea
🏊‍♂️ Ebe ịsa ahụ
🚴‍♀️ Ịgba ígwè
Åda Bird na-ekiri
🎣 Ịkụ azụ
🪁 Nature & n'èzí ndụ
⛸️ Ihe omume oyi
⛷️ Ịgba ọsọ mba
🛷 Toboggan na-agba ọsọ
🏡 Ezigbo ụlọ
🖼️ Arts & Crafts
🏡 gburugburu omenala-akụkọ ihe mere eme
🏘️ Ụlọ ihe ngosi nka na ihe ngosi
🌲 Nchekwa okike
🏞️ Parks & nlegharị anya
Heron, onye na-ekpuchi mmiri ma ọ bụ tern?
N'ezie onye ọ bụla nwere ike ile nnụnụ anya! Nwee ike n'ụkwụ gị, akpa nri ehihie na ọnọdụ uche gị kachasị mma ma gaa leta ụlọ nnụnụ Ryningen, ndịda Mörlunda. Ọ bụ otu n'ime mmiri mmiri kachasị ukwuu na ndịda ọwụwa anyanwụ Sweden. Enwere ike inweta uzo di nfe na ulo elu nnunu abuo, ikpo okwu, ebe ndi na-adọba ụgbọala, ụzọ na ama ihe omuma. Chọrọ ileba anya na ya? Mpaghara Hulingen na-echebe nnụnụ na Mörlundaslätten bụ mpaghara abụọ ọzọ mara mma na obodo anyị.
Nnụnnụ ụlọ Ryningen
Ryningen bụ otu n'ime ala mmiri kachasị ukwuu, nke a na-ekwu na ndịda ọwụwa anyanwụ Sweden. Ihe dị ka hectare 300 dị n'ókè dị n'etiti Hultsfred na Högsby obodo n'ebe ahụ.
Mörlundaslätten dị na G fromrdveda n’ebe ugwu ruo Tigerstad n’ebe ndịda. Ọ bụ ala a zụlitere nwere nnukwu ala ahịhịa. Emån na Gårdvedaån na-agafe ebe ahụ. M de
Ebe obibi nnụnụ nke Hulingen
Hulingen bụ ọdọ nnụnụ mara mma yana ebe izu ike maka nnụnụ na-akwaga n'oge mgbụsị akwụkwọ na mmiri. Hulingen nwere agwa ọdọ mmiri dị larịị nke nwere nnukwu ahịhịa ahịhịa, ọkachasị na ndị ahụ
Chọta ebe a
Deba ama ihe
Kuki & Nchịkọta
Iwu Ozi Nkeonwe
Right Copyright - 2021 igbara.ru
Kuki na teknụzụ nchekwa yiri ya	anabata
Anyị na visithultsfred.se na -asọpụrụ nzuzo gị ma jiri mmekọrịta anyị na gị kpọrọ ihe. Anyị ghọtakwara na ị nwere ike nwee echiche gbasara nzuzo gị yana gbasara otu anyị si eji kuki. Dịka ọtụtụ ndị ọzọ, webụsaịtị anyị na -eji teknụzụ ịnakọta ozi na -enyere anyị aka melite ahụmịhe gị yana ngwaahịa na ọrụ anyị.